Andro: 8 mey 2020
Ny vaksiny Kovid-19 Tonga amin'ny sehatra fanandramana biby
Nanambara ny minisitry ny indostria sy ny teknolojia Mustafa Varank fa ny vaksin-tsolom-bolo (recombinant) hamboarina manohitra an'i Kovid-19 dia nahatratra ny dingana fanandramana biby 3 an'ny oniversite ary iray tamin'izy ireo no nanomboka ny fanandramana. Ny filazana fa ny dingana klinika dia tonga taorian'ny fanandramana [More ...]
Hanao ahoana ny sidina İZBAN, ESHOT sy Metro amin'ny faran'ny herinandro ao İzmir?
Nisy drafi-pitaterana fitateram-bahoaka nomanina nandritra ny andron'ny 9-10 Mey, rehefa hampiharina ao amin'ny İzmir ny làlam-pandehanana. Serivisy fitateram-bahoaka an-tsokosoko amin'ireo vondrona sy mpiasa matihanina; Ireo bisy ny ESHOT, amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Metro sy TCDD-İzmir Metropolitan Munisipaly [More ...]
Miasa amin'ny famerana faran'ny herinandro ve i Marmaray?
Marmaray Halkalı-Gebz ny fiaran-dalamby, manam-pahefana sy ny olom-pirenena ivelan'ny sehatra ny fahazoana mivezivezy amin'ny alina, mba hanome fitaterana ny Repoblikan'i Torkia nanao intervals antsasak'adiny tao anaty fanambarana avy amin'ny Tale Jeneraly lalamby-panjakana; " Ministry ny atitany [More ...]
Covid-19 Diagnostic Centre dia miorina ho an'ny mpiasa OSB any Bursa
Bursa Chamber of Commerce and Industry dia nanao fanadihadiana lehibe izay manahy akaiky ny orinasa sy ny mpiara-miasa aminy noho ny fipoahan'ny coronavirus (COVID-19). Ministeran'ny Fahasalamana, Torkia Institiota ny Fahasalamana Administration (TÜSEB), BCCI sy Bursa Voalamina [More ...]
Ny fandoavam-bola voalohany 5,5 tapitrisa Liras dia natao tamin'ny làlan'ny fiara fitateram-bahoaka any Kocaeli
Taorian'ny areti-mifindra coronavirus izay nihatra tamin'izao tontolo izao dia i Kocaeli Metropolitan Mayor Assoc. Dr. Nataon'i Tahir Büyükakın, hisy “rano velona” ho an'ny varotra fitateram-bahoaka [More ...]
Izmir mponina ao an-trano amin'ny faran'ny herinandro, ireo ekipa İZBETON dia miasa!
Izmir Metropolitan Munisipaly dia hiasa amin'ity faran'ny herinandro ity, izay hampiharana ny curfew, misy ekipa 19 ho an'ny asfidy sy ny fikojakojana ny làlana. Toa an'i Mürselpaşa, Yeşildere, Akçay, Mithatpaşa lalana ary Altınyol [More ...]
Metrobus Metro sy Ferry asa mandritra ny faran'ny herinandro any Istanbul?
Hanohy manompo an'i Istanbul ny IMM miaraka amin'ireo olona 17 XNUMX eo ho eo amin'ity faran'ny herinandro ity, izay hitohizan'ny làlana mankany. Ny serivisy bus sy metro ary ferry no atao amin'ny maraina sy hariva. Fanadiovana manerana ny tanàna, [More ...]
Miasa amin'ny faran'ny herinandro ao Ankara ve i Ankara Ankaray sy Metro?
Mifanaraka amin'ny fanapahan-kevitry ny Birao Misahana ny Fahadiovan'ny governora ao Ankara, tamin'ny daty 19 ary niisa 09/10, tamin'ny daty 2020-07.05.2020 Mey 2020, izay ampiharina amin'ny fehin-dalàna ny fehin-kevitra tokony horaisina amin'ny valan'aretina coronavirus (Covid-30). [More ...]
Sakan-tany 25 no handia avy any Anatolia mankany Eropa miaraka amin'i Marmaray isan-taona
Minisitry ny governemanta Karaismailoğlu: “Fangalarana 25 isan-taona dia haingina avy amin'ny foibe indostrialy ao Anatolia ary hiampita ny faritra eoropeana mankany Marmaray. Ny fanondranana vokatra vokatra aondrana, izay efa vita any Çorlu, mankany amin'ireo firenena eoropeana dia hotanterahina amin'ny lamasinina. Nomen'ny lamasinina [More ...]
Fampiharana lefitra amin'ny fiara fitateram-bahoaka tsy miankina any Şanlıurfa
Ny Kaominin'i Metropolitan, izay noheverina ho mendrika mendrika sy ny fanao fanaony amin'ny sehatry ny fitateram-bahoaka any Şanlıurfa, dia nanafoana ny fampiharana ny Bus Public Public amin'izao fotoana izao. Ny fiara fitateram-bahoaka sy ny mpandeha [More ...]
Hizara masky mandritra ny 65 taona any Izmir, ka aiza no hividianantsika azy?
Izmir Metropolitan Munisipaly dia hizara saron-tava ho an'ny olom-pirenena mihoatra ny 65 taona, izay afaka mandeha an-dalambe amin'ny ora voatondro ho an'ny Ministeran'ny raharaha anatiny. Fanohizana ny famokarana sy fizarana saron-tava mba hanamora ny fidiran'ny olona mpitsabo ho any İzmir, İzmir Metropolitan [More ...]
Ny mpiasa tiorianina mba hitazomana ny rafitra misilika fiaramanidina fiaramanidina S-400
Filohan'ny indostrian'ny fiarovana Tiorka. Dr. İsmail Demir, mpiasam-panjakana SSB IanaoTube Namaly fanontaniana tamin'ny alàlan'ny fantsona izy. Tao anatin'ny kabary nataony izay nanombantombanan'i mailsmail Demir ny toe-javatra ankapobeny teo amin'ny sehatra, dia nanahy ny rafi-piarovana fiaramanidina S-400 izy. [More ...]
Fanomezana balafomanga an'i PorSav Tena ambany indrindra ny fiarovana fiaramanidina an'habakabaka dia manomboka
Ao anatin'ny salan'ny tetik'asa fanoratana fiaramanidina Portable Air Defense System (PORSAV), izay tanterahana miaraka amin'ny ASELSAN sy Roketsan, ny hetsika fandefasana dia kasaina hanomboka ao anatin'ny fotoana fohy. Indostrian'ny fiarovana miaraka amin'ny gazetin'ny sehatra tamin'ny andro iray momba izany [More ...]
ASELSAN, KANGAL Drone-Mini / Micro UAV & RFEYP Mixing / Blinding (Jammer) Rafitra notakian'ny Rafitry ny Tale jeneralin'ny fiarovana sy ny herinaratra amin'ny herinaratra an-tsokosoko ao anatin'ny ambaratongan'ny fifanekena nosoniavina tamin'ilay talen'ny fiarovana indostrian'ny fiarovana (SSB) tamin'ny taona 2018. [More ...]
Serivisy amin'ny Internet an'ny orinasa - Neirt
Ny orinasa; Nanomboka nanompo anao tamin'ny taona 2012 ary nahavita tetikasa marobe. Drafitra amin'ny Internet ho an'ny mpanjifantsika sarobidy amin'ny alàlan'ny fampandrosoana ny serivisy ara-teknolojia takian'ny tontolo nomerika isan'andro. [More ...]
All About Adana lamasinina
Adana Train Station no fiaran-dalamby lehibe amin'ny TCDD izay any amin'ny distrikan'i Seyhan ao Adana. Natao tamin'ny 1912 ny serivisy. Androany dia fonenan'ny TCDD faha-6 Dirité régional sy Adana - lalamby Mersin. [More ...]
71 Karazan-javamaniry Endrikana hita ao amin'ny Tuz Gölü Basin
Ny minisitry ny tontolo iainana sy ny tanàn-dehibe, Murat Kurum, dia namantatra ny karazan-javamaniry endemika tsy manam-paharoa iray tao amin'ny Basin Salt Lake eto amin'izao tontolo izao, ary ny flamingôma 71 20 no velona tao Tuz Gölü. [More ...]
Taratasy sigara tsy nahatratra 37 tapitrisa 190 tapitrisa no voatazona tao İzmir
Lavam-paritry ny sigara sivana 37 tapitrisa 190 no voarohirohy tamin'ny fikarohana nataon'ireo ekipan'ny talen'ny Ministeran'ny varotra ao amin'ny ministeran'ny varotra tao anaty fitoeran'entana misy votoaty mampiahiahy ao amin'ny Seranan'i iazmir. Notarihan'ny fivarotana sigara [More ...]
Noho ny fepetra coronavirus dia misy ny orinasam-pitaterana an-tsokosoko mitondra fiara fitaterana 50 isan-jaton'ny asa miandry. Anisan'ireo fangatahana napetraky ny Minisitra Karaismailoğlu, tsy voaloa amin'ny VAT 1 isan-jato ny MTV, ary ny fampiasana FSM Bridge avy amin'ny refund SCT. [More ...]
Ny monisipaly Metropolitan, izay nahomby tamin'ny fitaterana an-tanàn-dehibe dia tonga teo amin'ny tsipika làlambe avy ao amin'ny hopitaly City ka hatrany amin'ny Distrika faha-75 taonan'ny Opera tamin'ny alàlan'ny Distrikan'i Kumlubel, tamin'ny alàlan'ny angovo ho an'ny tsipika vita. [More ...]
Ireo nandresy tamin'ny "Zavakanto tanora: Fifaninanana Poster faha-4" nokarakarain'ny Ministeran'ny Kolontsaina sy ny fizahantany dia nambara. Nandritra ny fifaninanana mitondra ny lohateny hoe "Domination-i Milliye" dia natolotro vola 46 97 500 lira ny loka loka ho an'ny famoronana poster XNUMX. [More ...]
Minisitra Varank: 'Tsy avelanay hihavitsy ny indostria Tiorka'
Minisitry ny Indostria sy ny Teknolojia Mustafa Varank, nanamarika fa Torkia manana foto-drafitrasa famokarana mafy orina, "Tsy hamela ny fanalefahana ny Tiorka orinasa." hoy izy. Ny fanamarihana fa andrasana indray ny fifohazana ao amin'ny indostrian'ny fiara hatramin'ny tapaky ny volana jona, hoy ny minisitra Varank: [More ...]